China eyi Meltblown Fabric Production Line ụlọ ọrụ na-emepụta | Amara
Pee / eyi fim, ppingzụ ahịa na W ...
PET Washingsa Line
Mixkwanyere inggwakọta Unit
Eyi Meltblown Fabric Product ...
Eyi Meltblown Fabric Production Line
Ọ bụ ezie na a naghị achịkwa ọrịa zuru ụwa ọnụ n'ụzọ dị irè, dị ka onye na-eduzi ngwa ọrụ extrusion n'ụwa, Grace na-eji ohere zuru oke nke ahụmịhe ya na-eduga na teknụzụ na ụlọ ọrụ mmepụta extrusion, na-emepe ọgbọ ọhụrụ nke PP Melt-blown Production Line.
Dika akụrụngwa buru ibu maka imepụta ihe nkpuchi ahụike / nke ndi nkiti, akwa nchedo na ihe ndi ogwu ndi ozo, ahia ka nwere nnukwu ochicho maka akwa gbazee, karisia mgbe mba di iche bidoro iweputa ihe ogwu. ọkọnọ akwa gbazee ga-abụ nnukwu nsogbu.
Ya mere, Grace gbazee-fụọ Fabric Production Line e mere na elu arụmọrụ, kwụsie ike na ike ịzọpụta ga-abụ gị mma ego oke!
Agba gbazee na-eji ikuku ikuku na-agba ọsọ iji dọpụta mmiri dị mkpa nke polymer gbapụrụ site na isi nke ọnwụ, si otú ahụ mepụta eriri dị oke mma ma na-achịkọta ha na ákwà mgbochi ma ọ bụ drọm, ma n'otu oge ahụ ijikọ onwe ha ịghọ akwa agbazinye agbaze agbazere gbazee.
GRACE igwe 600mm / 1600mm eyi Meltblown Fabric Production Line The dum Usoro nke eyi gbazee-fụọ Fabric Production Line:
Akụrụngwa na ike oriri achọrọ maka nke ọ bụla tọn gbazee-fụọ akwa mmepụta
Ngwaọrụ achọrọ maka otu nde mkpuchi ihu nwere ike (tọn)
Ọkachamara na mmepụta ihe:
Ọgbọ ọhụụ nke 99 + ọkwa PP meltblown fabric production line
Standardkpụrụ ndị na-emepụta ihe nkiri nke European: Branddị ụgbọala na gearbox: siemens; Gbazee mgbapụta: swiss maag.
Elu àgwà anwụ isi: magburu onwe eruba ọwa imewe na edo ihapu, eriri dayameta bụ n'okpuru 1.5um.
Siemens PLC centralized akara usoro: ọgụgụ isi na ndị ọzọ adaba. Ogwe osisi Electrostaic.
Nke gara aga: Ọnụahịa onye na-ere ahịa ọnụahịa zuru ezu - CPVC Pipe Extrusion Line - Grace